Ekekọrịta ihe omuma A Ndepụta nke Weebụ Weebụ Weebụ
A na-eji ndị na-ere ahịa weebụ ma ọ bụ ndị na-ewepụta ihe site na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na ndị mmemme na-adọta ozi naanị site na saịtị onye na-asọmpi, dị ka isiokwu ndị e zoro ezo, akara ID, ebe ndị ahịa, na njikọ bara uru. Ụdị data a na-enye ndị ahịa na ndị webmasters ohere iji tụnyere ego nke ngwaahịa dị iche iche, na-eme nnyocha ntanetị, na-edepụta ebe nrụọrụ weebụ ha maka njikọrịta dị mma search engines, ma na-ewulite azụlinks dị mma.
Software Scraping kachasị mma:
Ọ dị mma ikwupụta na e nwere ọtụtụ nchịkọta weebụ na nchịkọta weebụ, ma maka ọrụ nzuzo na nke azụmahịa. Ngwa dị ka Google Web Scrapers, YahooPipes na Outwit ejiriwo na ịntanetị. Ugbu a, ọ bụ oge iji chọpụta ndepụta nke ndị na-ewepụta ihe na weebụ kachasị ike na ndị kachasị ike.
HarvestMan bụ onye ntanetị weebụ a ma ama nke e dere na Python wee jiri ibudata faịlụ sitere na ibe weebụ - registrar dominio email google. Ị nwere ike ịdepụta ya nke weebụsaịtị ịchọrọ wepụ na ihe ọhụrụ nke HarvestMan ga-arụ ọrụ ahụ achọrọ n'ime sekọnd. A maara ya nke ọma maka onye ọrụ ya-iwu ndị a kapịrị ọnụ ma nwee nhọrọ nhọrọ na atụmatụ iri isii na iji nweta irite uru na. Ọ bụ eziokwu na HarvestMan bụ ndụmọdụ dị ukwuu na usoro multithreaded, mana ntinye mbụ gị agaghị adị mfe.
Ọdịnaya Enweghi ike:
Content Grabber bụ onye na-arụ ọrụ na netwọk weebụ, onye nchapu, na onye na-ewepụta ihe. Ọ bụ nke a ma ama, nke a na-atụ egwu na nke siri ike, nke a maara nke ọma maka njirimara enyi ya. Akụrụngwa a nwere njirimara na njirimara niile ị ga-ahụ naanị na mbubata..na-amasị m ngwa ngwa. Enweghi ike iweputa ma ederede na ihe oyiyi n'emebighi mma. Enwere ike itinye ya na Google Docs, Dropbox na Google na-enweghị nsogbu ọ bụla. O nwere ikike iji wepụ data sitere na ibe weebụ ma mee ka ọ bụrụ ụdị aha ya.
Mozenda dị mma maka iji azụmahịa, mmalite, mmemme, ndị mmepe na ndị ahịa mgbasa ozi. A na-emepụta ngwá ọrụ a pụrụ iche ma dị ike maka nbudata data ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ọ na-enyere nsị ma ọ bụ ndepụta na saịtị na nwere isi & pịa interface. Ọzọkwa, ikike nke ígwé ojii ahụ nwere ike ichichapu, chekwaa, jikwaa ma hazie data n'enweghị ihe ọ bụla, ọ bụ n'ihi ngwongwo ndabere nke Mozenda iji mee ka ndị ọrụ ụwa niile nwee ike ime ya.
Ngwakọta dị iche iche, site na mmalite maka ụlọ ọrụ gọọmentị, nwere ike ịchekwa data na nchịkọta ọchụchọ site na iji Mkpacha. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị dị egwu na ndị bara uru weebụ na ndị na-enyocha ihe na weebụ. Akụrụngwa a na-enye aka ịnyagharịa ndepụta nke data na ibe weebụ dị mma. Enweghi ike inweta ozi bara uru site na Ịntanetị agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na enweghị usoro mmemme a. Mgbe ọ na-agbaji ma ọ bụ na-agbawa saịtị, ị nwere ike ilekwasị anya na Olee otú achọta na-arụ ọrụ ya na otu o si arụ saịtị gị.
Ikpeazụ ma ọ bụghị nke kachasị, ScrapeBox bụ ihe ntanetịime weebụ na-enye aka, nchịkọta ma na-egwu egwu. Ndị ọkachamara SEO na-eji ya eme ihe, webmasters, na ndị na-ere ahịa n'Ịntanet. Ụfọdụ spammers na hackers na-ejikwa usoro a na-ewe ihe ubi site n'ọtụtụ ebe na blọọgụ ozugbo. Ọ na-adọta ID ID, na-enyocha akwụkwọ gị, uru nke backlinks, na-ebupụ URL, na-enyocha proxies, ma na-enye RSS dị ike na-enye ndị na-agụ gị akwụkwọ.